Nhau - Sublimation kudhinda maitiro
Ndeipi sublimation yekudhinda maitiro
Sublimation kuchinjisa kudhinda kutanga inoshandisa kudhinda kupurinda yakasarudzika ekudhinda dhayi pamapepa ekuchinjisa, uyezve kupisa uye michina yekuchinjisa madhayi kumucheka. Zvikurukuru, iyo yakavakirwa pane sublimation hunhu hwekuparadzira madhayi, sarudza kumwaya madhayi ane sublimation tembiricha renji ye 180 ~ 240 ℃, uye uisanganise neslurry yekugadzira inki dzemavara. Zvinoenderana nemaitiro akasiyana uye pateni zvinoda, Ep ~ J, Ruvara inki rwakadhindwa pabepa rekuchinjisa, iyo pateni uye pateni yakadhindwa yekuchinjisa bepa iri padhuze nepadhuze nemucheka, uye dhayi rinotamiswa kubva pabepa rekudhinda kuenda kune jira mushure kugadzirisa pane yekuchinjisa yekudhinda muchina pa200 ~ 230 ℃ ye10 ~ 30s. Mushure mekupararira, inopinda mukati mejira kuti ibudirire chinangwa chekara. Mukuita kwekudziya uye sublimation, kuitira kuti dhayi ipararire nenzira, vacuum inowanzo kutorwa padivi pasi pezasi kwechinhu chakavezwa kuti uwane huturu hwekutungamira uye kuchinjisa dhayi uye nekuvandudza mhando yekuchinjisa.
Zvakanakira T-shirt tsika sublimation maitiro: yakanaka kudhinda maitiro
Kana iyo T-shati yekugadzirisa zvinodiwa iri yakaoma, dhayi sublimation maitiro isarudzo yakanaka. Iyo jira rakadhindwa neiyo dhayi sublimation kuchinjisa tekinoroji ine akajeka mapatani, akajeka mavara, akapfuma uye akajeka akaturikidzana, yakakwira hunyanzvi, uye yakasimba matatu-mativi kunzwa. Izvo zvakaoma kupurinda neyakajairika nzira, uye unogona kupurinda kutora mifananidzo uye kupenda maitiro mapatani.
Zvakanakira T-shati tsika sublimation maitiro: chakadhindwa chigadzirwa chinonzwa zvakapfava uye chine hupenyu hwakareba hwebasa.
Chinhu chikuru pane dhayi sublimation kuchinjisa ndechekuti dhayi inogona kupararira mu polyester kana fiber, uye chigadzirwa chakadhindwa chinonzwa chakanyorova uye chakasununguka, uye hapana kana iri diki yeingi. Uye zvakare, nekuti inki yakatoomeswa panguva yekufambisa, hupenyu hwemufananidzo hwakareba sehupenyu hwehembe yacho pachayo, uye hapazove nekupera uye kubvarura kwemifananidzo yakadhindwa, inozokanganisa runako rwejira. .